Gingilchaawwan Alaagi faayiloota XML alaantoo fe'uu fi dhangii faayilootaa gara dhangii faayilii XML Open Dokumentiitti geedara. Gingilchaa alaagi erga ijaartee booda, maqaan gingilchaa tarree akkaakuuwwan faayilii kan Qaaqa Faayilii Bani keessatti dabalama.
Gingilchaawwan Alergii faayiloota XML Open Dokumentii geedara, olkaa'i faayilii gara dhangii XML birootti geedara. Gingilchaa alergii erga ijaartee booda, maqaan gingilchaa tarree akkaakuuwwan faayilii kanQaaqa alergii keessatti dabalama.
Gingilchaawwan Alaagi/Alergii faayiloota XML Open Dokumentii gara gingilchaa XML dhangii birootti fe'ee olkaa'a. Gingilchaawwan kana erga ijaartee booda, maqaan gingilchaawwanii tarree akkaakuuwwan faayilii kan Qaaqa Faayilii Bani fi Qaaqa Faayilii Akka Olkaa'i keessatti dabalamu.
Firoomina Fuulota saphaphuu addunyaa maraa kan dheertoo Wardii Akkaataa Afaan (XSL)
Firoomina Fuula Saphaphuu Addunyaa Maraa kan dheertoo Afaan Markup (XML)